म जनताको अदालतमा आएको छुः नवराज सिलवाल (अन्तरर्वाता भिडीयो सहित) « Light Nepal
म जनताको अदालतमा आएको छुः नवराज सिलवाल (अन्तरर्वाता भिडीयो सहित)
नेपाल प्रहरीको डिआइजी पदवाट राजिनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका नवराज सिलवाल अहिले ललितपुर क्षेत्र नं १ वाट प्रतिनिधि सभाका लागि बाम गठबन्धनका तर्फवाट उम्मेदवार बनेका छन् । बरियताका क्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका जयवहादुर चन्दलाई एआइजी बनाइए पछि उनी अदालत गुहार्न पुगेका थिए । अदालतवाट समेत न्याय नपाए पछि उनी राजनीतिमा होमिएका हुन् । डिआइजि पदवाट राजिनामा दिएका सिलवालले एमालेमा प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरे । ललितपुरकै स्थानिय बासीन्दा सिलवाललाई बामगठबन्धनले उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्यो । उम्मेदवार बनेपछि भोट माग्दै घरदैलो हिंडिरहेका नवराज सिलवालसंग लाइट नेपालका श्रृजना आचार्यले चुनाव प्रचार अभियान र उनको एजेण्डाका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
प्रचार प्रसारको अभियान कहिले देखि सुरु गरिरहनुभएको छ ?
हामीले जनतासंग भेट्ने, मिटिगं गर्ने, आफ्ना एजेण्डा लैजाने कामहरु त सुरुवाट नै गर्दै आएका थियौं । तर गठबन्धनको संयुक्त प्रचार अभियान आजवाट सुरु गरेका हौं । आज टासिगंचोकवाट सुरुभएको अभियान गोदावरी नगरपालिकाको वडा झरुवारासी आइपुगेका छौं । हामीले यो पवित्र भूमीवाट प्रचार अभियान सुरु गरेका छौं । यो प्रचार अभियान मात्र होइन यो विजय अभियान हो । चुनावमा लड्नु उम्मेदवार हुनु एउटा कुरा हो तर जनताको माया पाउनु भनेको अर्का महत्वपुर्ण कुरा हो । मुलुक परिवर्तन गर्ने क्रममा बामगठबन्धनले जुन एजेण्डा ल्याएको छ त्यसले सुन्दर भविष्यको ढोका खुल्छ । हामी कुनै आश्वासन दिदैंनौं प्रतिवद्धता जाहेर गर्छा । स्थानिय श्रोतलाई प्रयोग गरेर नयां अवधारणा सहित जीवन परिवर्तन गर्ने तर्फ हामी अगाडी जान्छौं ।
तपाई अहिले घरदैलोमा हुनुहुन्छ, मतदाताको कस्तो प्रतीकृया पाउनुभएको छ ? तपाई प्रति यहांका नागरिकको अपेक्षा के रहेछ ?
तपाईले केही बेर देखि हामीलाई पछ्याइरहनुभएको छ । तपाई आफैले पनि प्रत्यक्ष देख्नुभयो । कतिपय भुकम्प पीडित भेटिनुभयो । उहांहरुले अहिले सम्म पहिलो किस्ता पनि राहत नपाएको कुरा गर्नुभयो । हाम्रो कोही मान्छे भएन । यो भन्दा पहिला जिताएर पठाएकाहरुले हाम्रो कुरा सुनेनन् भन्नुहुन्छ । सडक छैन, भएका सडक पनि मर्मत भएका छैनन्, धुलो उडिरहेको छ । खाने पानी छैन । यस्तै विविध किसिमका समस्या देखाउनुभएको छ । हामीले भनेका छौं तपाईहरु हामीलाई विश्वास गर्नुहोस हामी सके सम्म प्रयास गर्छा । तर हामीलाई त्यो “पलिसि” बनाउने ठाउंमा पुग्नका लागि तपाईहरुकै साथ र सहयोगको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
तपाई फरक पृष्ठभूमीवाट आउनुभएको छ । अहिले जुन भुमिका निभाइरहनुभएको छ त्यो क्रममा कस्तो महशुष गरिरहनुभएको छ ?
मलाई सहजनै भएको छ । अहिले “प्लेटफर्म“ फरक भएकाले जनताले कसरी प्रस्तुत हुन्छ भनेर चासो राखिरहनुभएको छ । तर मेरो हिंजोको काम, निष्ठा, मुलुकप्रतिको समर्पण सबैले देख्नुभएको छ । मैले अन्यायको विरुद्ध लामो लडाईं लडें त्यसले गर्दा म प्रत्येक जनताको मनमा बसेको छु । जनताले मलाई यो नयां अनुहार हो यसले हाम्रालागि केही नयां गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । त्यस हिसावले मलाई ठूलो उत्साह पनि छ । जनताको त्यस्तो विश्वास र भरोसा लिएर अगाडी बढ्न पाउनु, मुलुकको समृद्धिको अभियानमा एउटा महत्वपुर्ण टुलका रुपमा काम गर्न पाउनु यो आफैमा ठूलो कुरा हो । हिंजोको संकुचित दायरावाट उठेर एउटा ठूलो होराइजनमा आएको छु । यत्रो माया र स्नेह उर्लेको छ । त्यसैले एउटा उत्साह र उमंग छ मैले त्यस्तो अप्ठेरो महशुष गरेको छैन ।
राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले प्रचार अभियानमा हिड्दा ठूला आश्वासन दिएको देखिएको छ । तपाईले त मलाई भोट दिनुस् भनेर मागेको पनि देखिएन । यहांका नागरिकको लागि तपाईको एजेण्डा के हो ?
हिंजो राजनीतिक दलले ठूला कायापलट गरिदिन्छौं भनेर आश्वासन बांडे । चुनाव जिताएर पठाए पछि ४ वर्ष सम्म अनुहार पनि देखिएन । भेट्न जांदा पनि भेट्न पाइएन । हाम्रो आवाज त्यहां सम्म पुगेन भन्ने नागरिकको गुनासो छ । तर हाम्रो श्रोत साधनलाई हेरेर जे गर्न सकिन्छ त्यो कुरा भन्ने हो । मलाई के लाग्छ भने धेरै ठूलो कुरा केही गर्नै पर्दैन । घरमा बस्ने महिलाका लागि माइक्रो फाइनान्सिगं गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने एउटा बाटो मात्र देखाइदिने हो ,यसरी गर्ने भनेर गाइडलाइन दिने, मार्केट देखाइदिने हो भने त्यो परिवार आफै उठ्छ । मैले सामाजिक मानवलाई अब आर्थिक मानवमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको छु । ठूला सडक, परियोजना बनाउने त्यो मुलुकको आवश्यकता र साइज अनुसार त्यो भइहाल्छ । तर घर परिवारलाई माथि उठाउने खालका साना साना कुरा हामीले दिने हो भने स्थानिय बासीन्दाको जीवन परिवर्तन त्यहींवाट सुरु हुन्छ । म सडक बनाउने, ठूला योजना ल्याउने त्यस्ता आश्वासन दिन्न । जनताको अनुहारमा हांसो ल्याउने साना साना काम गर्छु । मेरो योजना यहि हो । म गरिब दुखी जनाताको आंगनमा पुग्न चाहन्छु । म इमान्दारीता पुर्वक, निष्कलंक भएर काम गर्छु ।
तपाई ललितपुरको माटोसंग परिचित हुनुहुन्छ । तपाईले आफैले आवश्यकता महशुष गरेका त्यस्ता के काम छन् । यहांका नागरिकका लागि ?
दक्षिण ललितपुरको कुरा गर्ने हो भने त्यहां बत्तीमुनीको अंध्यारो छ । बाटो, सडक काम लाग्ने छैन । युवा विदेश पलायन छन् । औषधि छैन । त्यसैले आर्थिक समृद्धि त्यहांको आवश्यकता हो । त्यसैले कृषि र माइक्रोक्रेडिटका माध्यमवाट आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न सकिन्छ । पर्यटनका लागि पदमार्ग र होमस्टेको अवधारणा लागूगर्न सकिन्छ । दलचोकीमा नगरकोट र भेडेटार जस्तै पर्यटनका लागि विकास गर्न सकिन्छ । विद्युतीकरणको आवश्यकता छ । विद्यालय निर्माण गर्ने, भुकम्पले क्षति पुर्याएका घर र पुर्वाधार पुननिर्माण गर्ने ।
खासगरि जनतालाई बांच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत कुराहरुका लागि काम गर्ने । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत कुराहरु लैजान्छौं । राजनीति प्रति जागेको वितिष्णा हटाउन उदाहरणीय रुपमा जनताका सामु प्रस्तुत हुन्छु । म संग त्यस्ता ठूला र महान एजेण्डा होइन समाज परिवर्तनका साना साना योजनाहरु छन् । यस अघि झुट बोलेर जसरी जनतालाई झुक्याउने काम भयो । ४ वर्ष पहिले जिताएर पठाएका अहिले सम्म फर्केर पनि आएका छैनन् । जनताले त चिन्दा पनि चिन्दैनौं भन्छन् । त्यसले गर्दा म यहिं हुर्केबढेको भएकाले म जनताकै घरदैलोमा हुन्छु । तत्कालका आवश्यकता पनि पुरा गर्न सजिलो हुन्छ । गठबन्धनको घोषणा पत्र जारी भएको छ । त्यो घोषणा पत्रमा भएका कुराहरु पुरा गर्ने तर्फ उत्तीकै भुमिका खेल्नेछु ।
अहिले घरदैलो अभियान सुरु गर्नुभाछ, सबै नागरिकको दैलोमा पुग्न सकिन्छ सकिन्न ?
प्रयास गरेका छौं । पहाडी एरियामा भएका घरहरु एक अर्का देखि निकै टाढा छन् । त्यस्ता ठाउंमा अलि समस्या होला । हामीले एकिकृत वस्तिको अवधारणा पनि अघि सारेका छौं । जति सकेको बस्तीमा पुग्ने । नसकेको ठाउंमा उनीहरुलाई एकिकृत गरेर कोण सभा गर्ने आफ्ना कुरा राख्ने योजनामा छौं । मलाई नागरिकहरुले टिभीमा देखेको तर प्रत्यक्ष देख्न पाएका छैनौं भन्नुभएको छ । त्यसैले म सकेसम्म सबैको दैलोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
जीत प्रति कत्तीको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म त जनताको अदालतमा आएको छु । अहिले सम्म यति धेरै समर्थन छ । म पुर्ण विश्वस्त छु । मेरो जीत अवश्य हुन्छ । त्यसैले म अहिले देखि नै सोचीरहेको छु, जित पछि मेरो अभिभारा पुरा गर्न । फेरी पुरानै प्रतिनिधिहरुले गरेजस्तो हुनुहुदैन भन्ने कुरामा म निकै चिन्तित छु । मलाई यति राम्रो माला लगाइदिनुभएको छ । स्नेहपुर्वक माया उनेर घर घरवाट माला लगाइदिनुभएको हो । मेरो त्यो जिम्मेवारीको रुपमा पनि मैले यो मालालाई लिएको छु । जित्नेकुरामा मलाई कुनै शंका छैन । त्यसपछिको जिम्मेवारी निभाउने कुरामा म अहिले देखि नै चिन्तित छु ।